Banyere Anyị - Foshan Hermes Steel Co., Ltd
Dị ka a Premiya igwe anaghị agba ígwè n'elu mmebe na China, Foshan Hermdeco Steel Co.,Ltd ike na 2006, nke na-agbalị maka igwe anaghị agba ígwè ọhụrụ na àgwà n'ihi na ihe karịrị 10 afọ. N'ihi ya, anya, anyị mepụtara n'ime a nnukwu integrated enterprise nke igwe anaghị agba nchara ihe onwunwe nke imewe, nhazi.
Tụkwasịnụ nza nke oru na ngwá ụlọ ụlọ mmepụta ihe, oru ngo na Airport, Metro na Building Architecture, igwe anaghị agba nchara stockholder na South Korea, Thailand, Vietnam, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Philippines.
IHE ANYỊ MEE UGBU A?
Iji izute nza nke ndị ahịa ina na-arịọ arịrịọ, ugbu a anyị na-etinye onwe anyị ọ bụla n'ọhịa ebe igwe anaghị agba nchara na-eji, igwe anaghị agba nchara Mozis, igwe anaghị agba nchara na ngwaahịa & Ụgha, gụnyere nkebi, trims, mbuli akụkụ, Trolley, wdg
Ntak emi Họrọ US?
- Na ihe karịrị afọ 10 ahụmahụ ndị a ubi, anyị nwere a ọkachamara & ike ebupụ otu.
- Our kwa ọnwa olu nke sales esịmde karịa 10000 tọn, na anyị na ngwaahịa ndị miri emi na-ewu ewu n'ụlọ na mba ọzọ, dị ka Middle East, Southeast Asia na Africa, wdg
- Na elu na ngwá na Kacha ọhụrụ technology, anyị na-ọma mara dị ka ihe nlereanya enterprise n'ihi nke magburu onwe ya mma ọkọlọtọ.
- dechara àgwà akara usoro, mgbe-ire nkwado & ọrụ.
- ngwaahia ase na-mgbe nabatara! FREE samples ike zitere na-arịọ arịrịọ!